तोडिएला त गोलको खडेरी? | Hamro Khelkud
तोडिएला त गोलको खडेरी?
काठमाडौँ (हाम्रो खेलकुद) – एएफसी यू२३ च्याम्पियनसिप २०१८को छनोट चरणमा सहभागिता जनाउन नेपाली टोली युएईको अल आइन सहरमा छ। तर प्रतियोगिताको सुरुवाती २ खेलमा पराजय भोगेसँगै नेपालको अन्तिम चरणमा छनोट हुने सपना भने बिलिन भइसकेको छ। नेपालले पहिलो खेलमा आयिजक युएई संग ५-० र दोश्रो खेलमा उज्वेकिस्तानसँग २-०को हार व्येहोरेको हो।
सन् २०१३मा एसियाली फुटबल महासंघले एएफसी यू२२ च्याम्पियनसिपको पहिलो संस्करण आयोजना गरेको थियो। नेपालमै योजना गरिएको उक्त प्रतियोगिताको छनोट चरणमा नेपालले ४ खेलमा १ जित र ३ हार व्येहोरेको थियो। पहिलो खेलमा बंगलादेशलाई ४-१ले पराजित गरेको नेपालले दोश्रो खेलमा यमनसँग १-०ले पराजित भयो। तेश्रो खेलमा उज्वेकिस्तानसँग ४-२ले पराजित भएको नेपालले अन्तिम खेल जोर्डनसँग ३-०ले हार्यो।
उज्वेकिस्तानविरुद्धको ४-२को हारमा सुजल श्रेष्ठले ४२औं मिनेटमा गोल गर्दै खेललाई २-२को बराबरीमा ल्याएका थिए। उक्त गोलनै नेपालको लागि एएफसी यू२३ उमेर समूहको पछिल्लो गोल हो। सन् २०१२ जुन २०मा दशरथ रंगशालामा गरेको उक्त गोलपछि नेपालले यस उमेर समूहमा ७ खेल खेलिसक्दा कुनै गोल गरेको छैन।
सन् २०१६को संस्करणमा एएफसीले यू२२ को सट्टामा यू२३ उमेर समूहलाई समेट्ने निर्णय गर्यो। नेपालले २०१६को संस्कारणको छनोटका लागि भने मार्च २०१५मा छनोट चरणका खेलहरु खेलेको थियो। इरानमा भएको छनोट चरणमा नेपालले ४ खेलमा १७ गोल खाएको थियो भने कुनै गोल गर्न सकेको थिएन। जगजित श्रेष्ठको कप्तानीमा इरान पुगेको टोलीले पहिलो खेलमा घरेलु टोलीसँग ५-०, अफगानिस्तानसँग २-०, साउदी अरेबियासँग ६-० र प्यालेस्टाइनसँग ४-०को नतिजा ल्याएको थियो।
७ खेलसम्म गोल गर्न नसकेको नेपाली टोलीलाई आज लेबनानविरुद्धको खेलमा गोल गरेर उक्त खडेरी तोड्ने मौका छ। पछिल्ला २ खेलमा पराजित लेबनानको पनि छनोट हुने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली फरवार्डहरु विमल घर्ती मगर र सन्जोग राईमाथि गोल गर्ने दबाब पक्कै रहनेछ। आजको खेलमा पनि गोल गर्न नसकेको खण्डमा नेपाली समर्थकले यू२३ उमेर समूहको एएफसी प्रतियोगितामा गोल हेर्न अर्को संस्करणको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ।